19 लागि परिणाम penguin
मडागास्कर को पेंगुइन: कप्तान skidoo
पागल Eights को एक पागल खेल मा पेन्गुइन Name सामेल!
लाश बनाम पेंगुइन 2
पेन्गुइन Name2कुरूप लाश बनाम लाश संसारको कब्जा गर्न जाँदैछन्! यो पेंगुइन सेना - तर तिनीहरूले सबैभन्दा शक्तिशाली सेना बारेमा थाहा छैन! प्रत्येक यसको सदस्य मार्न जन्म हुन्छ। प्रमाणित गर्नुहाेस! ग्रह सुरक्षित गर्न सबै लाश मार्न या fo प्ले पेंगुइन नष्ट
पेंगुइन उड्न सक्छ ... उनि एक रकेट स्लेज आफु! उपहार संकलन र यो क्रिसमस शैली मिलाइएको स्वतः धावक मा स्थानीय वन्यजन्तु जोगिन।
यी कछुवा संसारको हावी चाहन्थे। तिनीहरूले अवस्थित जनावरहरू अन्य प्रजातिका समाप्त भयो। र मात्र यो सुपर मूख्य यी पेन्गुइन रोक्न सक्नुहुन्छ। उहाँले यो चुनौती सामना गर्न तयार छ?
शिकार पेंगुइन 2
के तपाईं शिकार गर्नु हुन्छ? के तपाईं छिटो र सही रूपमा गोली चल्न सक्नुहुन्छ? यदि तपाईं सक्नुहुन्न भने, तपाईंको प्रार्थना बचाउनेछ। यो नि: शुल्क शूटर खेलमा धेरै पेंगुइन जित्ने रूपमा गोली हरूको शूटिंगको आफ्नो कुशलता अभ्यास गर्नुहोस्!
पेन्गुइन मणि तोप
पेंगुइन मणि तोप संकलन गर्न धेरै चमकदार रत्न एक पेन्गुइन, माछा र धेरै संग एक आकस्मिक भौतिकी तोप खेल हो। पूरा गर्न वृद्धि कठिनाई को एक उत्कृष्ट 40 को स्तर को लागि सबै सामाग्री।
पेन्गुइन Diner 2
एक अन्टार्कटिक ट्रेक छँदा मुद्रा को पेंगुइन बन्द ट्रयाक जान्छ र माथि एउटा चिसो पहाडी को शीर्ष मा, हराएका र penniless समाप्त हुन्छ। Luckily, एक स्थानीय Diner मालिक उनको जागिर प्रदान गर्दछ।
यो तीव्र sidescrolling शूटर मा 19 दुश्मन र मालिकहरुलाई हत्या अन्टार्कटिका मार्फत लड्न। आफ्नो शस्त्रागार निर्माण र पेंगुइन राजा बाहिर लिन नयाँ हतियार र अपग्रेड किन्न!
को आगमन पेंगुइन गोली त्यसैले तिनीहरू iglo पुग्न तोप!
हास्य कलाकार3झगडा: ड्रागन बल Z
स्कूल बस चालक
इन्जिन र नेतृत्व ônibus cidade Esse peeling रूपमा Trabalho। बराबरी वा स्थानीय VA बच्चाहरु यो र गाँसिएको वा कलेज छ रूपमा नम्र onde, तर ख्याल Nenhum नाउ कार ठोक्किनु com Seu बाल कहां Caminho अवरोध।
दिदीले र डिएगो आँखा क्लिनिक मा
दिदीले र उनको भान्जा डिएगो गम्भीर दृष्टि समस्याहरू छन्, त्यसैले पत्ता लगाउन के उनलाई प्रत्येक उहाँको नजरमा छ आँखा डाक्टर दुवै लिन्छन्। सबै परीक्षा क्लिनिक भित्र सबै प्रक्रियाहरु पालना गर्नुहोस्।
बेन 10 र भूत
बेन 10 मदत कृपया बेन 10 रन रन बाढी ghost.Run टाढा quickly.Stay चलिरहेको, जल्दी।
रेपन्जेल समय थप्न flynn संग विभाजित
रेपन्जेल टुक्रिनु Flynn संग एक अनलाइन खेल भनेर रेपन्जेल टुक्रिनु Flynn संग Timefor मुक्त थप्नुहोस् खेल्न सक्छन् छ। रेपन्जेल Flynn संग विभाजित गर्न चाहन्छ, तर परिणाम हुनेछ के, यो तपाईं मा निर्भर गर्दछ। तपाईं उनको यो har समयमा उनको साँचो प्रेम पाउन मदत गर्न सक्छ
विज्ञापन र घ इन्जिन - लडाकु
विज्ञापन र डी सिस्टम खेल्न यो आरपीजी
टम र जेरी हास्यास्पद पार्क
तपाईंको माउस कौशल जेरी माउस जम्प मदत गर्न प्रयोग र पकड र उहाँलाई खान बिरालोहरु नदेऊ। खेल्न तपाईँको माउस प्रयोग